သင့်ကလေးမှာ ပထမဆုံးဝက်ခြံတွေပေါက်လာပြီဆိုရင် သင်ဘာလုပ်သင့်လဲ - Hello Sayarwon
သင့်ကလေးမှာ ပထမဆုံးဝက်ခြံတွေပေါက်လာပြီဆိုရင် သင်ဘာလုပ်သင့်လဲ
တကယ်လို့များ သင့်ကလေးက ပထမဆုံး ဝက်ခြံပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ ဝေခွဲမရဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမယ်မှန်းမသိဖြစ်လာတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်က သူတို့ရဲ့ လမ်းပြကြယ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သူတို့ကို ဒီပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကို သင်ကြားပေးပါ။ တကယ်လို့များ ဘယ်ကနေ စလုပ်ရမယ်မှန်းမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက်ပါပဲ။
သင့်ကလေးတွေဟာ ဝက်ခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေ မသိသေးတဲ့အတွက် အကြောက်တရားတွေနဲ့ ပေါက်ကရနည်းတွေသုံးပြီးကုသတာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ပထမဆုံး လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကတော့ သူတို့ကို ဝက်ခြံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေ သေချာသိအောင် ပြောပြထားသင့်တာပါ။
သူတို့ကို ဝက်ခြံဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ အသားအရေ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အများစုမှာ ဝက်ခြံတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အရည်ပြားမှာရှိတဲ့ မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေမှာ အဆီဂလန်းတွေပါဝင်ပြီး ဒါတွေက အရည်ပြားရဲ့ အစိုဓါတ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အဆီတွေ ထုတ်ပေးပါတယ။်
ကလေးတွေ အရွယ်ရောက်စပြုလာတဲ့အချိန်မှာ လိင်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲမှုက အဆီဂလန်းတွေကနေ အဆီတွေ အများကြီးပိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အဆီပိုတွေဟာ ဆဲလ်အသေတွေနဲ့ရောပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေပါတယ။် ဒီအဆီအပိုတွေကပဲ Pလို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဝက်ခြံတွေပေါ်လာတော့တာပါပဲ။
သင့်ကလေးတွေက ဝက်ခြံတွေမပျောက်တော့မှာကို စိုးရိမ်ကောင်း စိုးရိမ်နေနိုင်ပါတယ်။ သင်က သူတို့ကို ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာစေဖို့ ဝက်ခြံကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အမာရွတ်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံအတွက် ကုသမှုတွေမှာတော့ OTCလိုးရှင်းတွေ၊ ခရင်မ်တွေ၊ ဂျယ်လ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်းပေးတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ benzoyl peroxide တွေနဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဝက်ခြံတွေက သူတို့အသားအရေပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေချန်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် အလင်းကုထုံး ဒါမှမဟုတ် ဓါတုကုထုံးတွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို ဒါတွေလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို အသားအရေကို သန့်စင်အောင်ထားဖို့ သတိပေးပါ။ ဝက်ခြံတွေကို မဖောက်ဖို့ မဆိတ်ဖို့ပြောပါ။ ဒါတွေက ဝက်ခြံတွေကို ပြန့်နှံ့စေပြီး အမာရွတ်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အမာရွတ်တွေကို ကုသဖို့က ပိုလို့ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
တကယ်လို့များ OTCလိုးရှင်းတွေ၊ ခရင်မ်တွေ၊ ဂျယ်လ်တွေဆေးတွေက သင့်ကလေးဝက်ခြံအတွက် ဘယ်လိုမှ အသုံးမဝင်ဘူးဆိုရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့သာ သွားပြပါ။ သူတို့တွေက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ကုသနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို လမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဝက်ခြံကို မှန်မှန်ကန်ကန် ညင်ညင်သာသာ ထိတွေ့ဖို့ ပြောပြပါ။
အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို ပုံမှန်လုပ်နေဖို့ သတိပေးပါ။ ဒါတွေက ဝက်ခြံတွေပြန်ဖြစ်မလာဖို့နဲ့ အခြားသော အသားအရေပြဿနာတွေ မဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ခေါ်သင့်လဲ။
သူတို့ရဲ့ဝက်ခြံတွေကုသရာမှာ သင့်ကလေးကို သင်က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာတော့ သင်တစ်ယောက်တည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘဲ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကိုတော့ ခေါ်ယူသင့်ပါတယ။်
တကယ်လို့များ သင့်ကလေးမှာ ဝက်ခြံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ ကာလရှည်ခံစားမှုပြဿနာတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဥပမာ- စိတ်ဆိုးခြင်း။ စိတ်ပျက်ခြင်း။
သင့်ကလေးကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနေပေမယ့်လည်း ဝက်ခြံတွေက ပိုဆိုးရင် ဆိုးလာနိုင်ပါသေးတယ်။
သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့ ကုထုံးတွေဟာ ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့။
တကယ်လို့များ သင့်ကလေးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝက်ခြံပေါက်လာတယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံတွေအကြောင်းနဲ့ အသားအရေဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ပြောပြပြီး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်က သူတို့ရဲ့ လမ်းပြပါ။ ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။ ဗဟုသုတတွေ ရှာမှီးပါ။
Acne in Children. http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/pediatrics/acne_in_children_90,p01571/. Accessed January 1, 2017.
Teens and Acne. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/what-is-acne#1. Accessed January 1, 2017.
Acne and How to Treat It. http://teens.webmd.com/girls-puberty-10/girls-teen-acne. Accessed January 1, 2017.
အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်သော ကလေးများကို အနိုင်ကျင့်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်အရာတွေက တွန်းအားပေးနေသလဲ